Vaovaom-baovao 5 momba ny fanirery | Bezzia
Vaovaom-baovao 5 momba ny fanirery
Maria vazquez | 09/09/2021 12:00 | kolontsaina
Ny fararano dia vanim-potoana manasa anao hamaky. Taorian'ny fiainana ara-tsosialy be tamin'ny fahavaratra sy ny fahalavoana ateraky ny hafanana be dia be ny mpamaky mahita ny fotoana fararano hanitrihana antsika amin'ny famakiana akaiky sy melankolika. Ary eny, ireo mpanonta koa amin'izao fotoana izao dia miverina amin'ny mahazatra azy ireo ary miaraka amin'izy ireo ny vaovao ara-literatiora.
Mitety ny katalaogin'ny mpanonta, Nanangona zava-baovao dimy izahay, izay ahitana ny toetrany, noho ny antony samy hafa, miaina mandritra ny fotoana fanirery. Ny vakiteny izay inoantsika dia tena mety amin'ity vanim-potoana ity ary efa navoaka nandritra ity volana septambra ity.
1 Nosy fitaka
4 Vehivavy iray ary saka roa
Mpanoratra: Paulina Flores
Mpanonta: Seix Barral
Rehefa miala amin'ny asa halanao ianao, Nandositra ny fiainany tany Santiago de Chile i Marcela mba hamangy an-drainy any Punta Arenas, any Patagonia. Hitany tao fa i Miguel, izay misy fifandraisana sarotra aminy, dia manafina tovolahy Koreana iray izay navotan'ny vondron'ireo mpanjono tany an-dranomasina. Mitoka-monina ao ambadiky ny rindrin'ny fahanginana sy tantara mampivadi-po i Lee dia mistery hivoahana, olona tafavoaka velona izay iarahan'izy mivady tsy handaminana ireo tsy fitovizany.
Nahazo aingam-panahy avy amin'ny trangan-tantsambo tatsinanana izay nanao ny ainy tsy ho zavatra tamin'ny fitsambikinana avy tany amin'ireo sambon-tsambo izay namakivaky ny Ranomasin'i Magellan, Ny Island Island dia mitantara ny fandosiran'ny telo mandositra mitady fialofana tsy ho kivy. Niresaka momba ny fitrandrahana ny ranomasina ankehitriny sy ny toe-draharaha tsy ampoizina tamin'ny taonjato XXI, namakivaky ny sisintanin'ny zava-misy ilay tantara ary tonga teo amoron'ny morontsiraka vaovao, izay mbola ahafahan'ny fahatsiarovan-tena, hadisoana ary famoizam-po lasa lasa mampientanentana ihany.
Nosoratana tamin'ny daroka sinema Mpandova sinema Koreana, araka ny tononkalo maha-mahery setra azy, Isla Decepción no tantara voalohany nandrasana hatry ny ela nataon'i Paulina Flores, mpandresy ny Loka Roberto Bolaño, nofidian'i Granta ho iray amin'ireo mpitantara mahay indrindra amin'ny Espaniôla ary mahamenatra ny boky voalohany, Qué , dia niara-nidera ny mpitsikera ary nadika iraisam-pirenena.
Mpanoratra: Barbara pym
Mpanonta: Gatopardo ediciones
Barbara Pym dia nanoratra ny Autumn Quartet tsy nanantena fa hahita ny hazavan'ny andro izy. Tsy dia navoaka nandritra ny fotoana ela izy io, raha jerena ireo mpampanonta azy fa napetraka tamin'ny fomba amam-borona lanin'ny kalalao sy kely ara-barotra izy io. Taorian'ny nilazan'ny poeta Philip Larkin sy ilay mpitsikera Lord David Cecil fa mendrika azy ireo, dia nahita mpanonta an'ity boky ity i Pym, izay hita fa Famaranana ny Booker Prize tamin'ny 1977 ary nampiorina azy ho iray amin'ireo mpanoratra anglisy be mpamaky sy be mpitia indrindra tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Miasa amin'ny birao iray ihany ireo mazoto amin'ity novela ity ary miatrika ny fararanon'ny fiainany tototry ny toerana mitokana izy ireo. Handeha misotro ronono i Letty nefa tsy nahita fitiavana. Marcia dia manana toetra mampiavaka azy sy miharihary, toetra izay nantitranterina hatramin'ny naha-mastectomy azy. Edwin dia mpitondratena iray izay variana loatra amin'ny fanatrehana lanonana ara-pinoana, ary Norman misanthrope iray izay tena ihomehezana. Izy rehetra dia miaina mihantona eo anelanelan'ny fahatsiarovany ny ady, fanomezana tsy azon'izy ireo - ny London of rock and roll and the miniskirt - ary ho avy manjombona. Ny rehetra kosa dia miziriziry hatrany amin'ny fitadiavana fanantenana ao anaty fiarahamonina izay miodina aminy na mangoraka azy ireo.
Mpanoratra: Carlota Gurt
Mpanonta: Boky asteroid
Daty famoahana: 13/09/2021
Mei, vehivavy roa amby efa-polo taona Tafaroboka amina fanambadiana tsy miraika sy izay vao noroahina tamin'ny asany izy dia nanapa-kevitra ny hialokaloka ao amin'ilay trano nahalehibe azy, trano fiompiana kely eo afovoan'ny ala. Any izy dia hanandrana hanoratra ilay tantara nanenjika azy nandritra ny taona maro raha mbola niatrika ny lasa izy, fanomezana tsy mety ary ho avy tsy ho ela.
Ity tantara ity dia tantaran'ny fikomiana, ny tantaran'ny manirery tsy mibebaka notantaraina tamin'ny fanisana miisa 185 andro mahaliana. Inona no atao hoe manirery? Zava-misy kendrena sa toe-tsaina, fitahiana sa fanamelohana? Ny hany azo antoka dia ny tsy hialanao amin'ny fitokana-monina tsy misy takaitra.
Vehivavy iray ary saka roa
Mpanoratra: Ayanta Barilli
Mpamoaka: Planeta fanontana
Daty famoahana: 22/09/2021
Ilay mahery fo, sora-tànan'ny mpanoratra azy, mitantara sy mitantara vanim-potoana manirery, marihin'ny fisarahana ara-pihetseham-po sy ny fialan'ny zanany, samy nankany amin'ny toerana tsy azony notsidihina.
Nandritra ireo volana ireo, tsy niaraka afa-tsy ny saka roa, ny fanoratana ihany no ho fanoherana azo atao manoloana ny fitsapana. Hodinihiny izao ireo fotoan-dehibe teo amin'ny fiainany, hita amin'ny fomba fiasa tsy maintsy atao, ka ny vehivavy - izay zanakavavy, reny ary olon-tiana ihany - dia ho lasa mpandainga.
Ny tsy fankatoavana no jiro manazava ny lalanao.
Daty famoahana: 29/09/2021
"Nihalehibe ny fahatsiarovan-tenany ary nihena ny ainy toy ny gleba polar."
Mila, vao nanambady an'i Matias, ny lehilahy tsy dia hainy loatra dia mandao ny tranony hanaraka azy any amin'ny hermitage lavitra iray mipetraka amin'ny tendrombohitra mikitoantoana. Rehefa tonga izy, dia hihaona amin'i Gaietà, mpiandry ondry matotra, mitsiky sy hendry, ary Ánima, mpametaveta mpanota. Izany toerana mitokana izany sy ireo zavaboary monina ao dia mitarika an'i Mila hanao dia anaty tsy misy fiverenana.
Manirery, sangan'asan'ny litera katalana, navoaka tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX, dia mitohy manankery amin'ny endriny sy endrika. Noho izany dia ilaina ny fandikan-teny ankehitriny, izay nandikan'ny poeta sy mpandika teny Nicole d'Amonville Alegría tamim-pitandremana amin'ny teny Espaniôla ny harena faratampony, ny fimailo ary ny tononkalo izay hita foana ao amin'ny prosa Caterina Albert.
Mazava ho azy fa tsy namaky na dia iray aza tamin'ireo zava-baovao ireo isika, na dia efa namaky, indrindra, ny roa tamintsika teny amin'ny arabe aza. Ahoana ny momba anao? Iza amin'ireo zava-baovao ireo no mahasarika ny sainao? Tianao ve ny mamaky tantara toy itony sa tianao kokoa famakiana mistery sa hafa maivana kokoa sy mangatsiatsiaka kokoa?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » ankehitriny » kolontsaina » Vaovaom-baovao 5 momba ny fanirery
Doormats tany am-boalohany hitsenana ao an-tranonao
Torohevitra 5 amin'ny fitehirizana akanjo sy kiraro fahavaratra